Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Timo Werner nke nwata akụkọ gbasara eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Timo Werner na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, arsgbọ ala, Net Worth, Web na Personal Life
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere njem ndị egwuregwu German, site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Iji mee ka agụụ akụkọ ihe mere eme gị dị ụtọ, nke a bụ nwata ya na gallery okenye - mmeghe zuru oke na Timo Werner's Biography.
Site na ndụ nwata ya ruo n'oge ama ama. Akwụkwọ akụkọ a na-adịghị ahụkebe nke Timo Werner.
Ee, mụ na gị maara na German bụ onye na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Nke kachasị mkpa, otu n'ime ndị na-agba ọsọ ọsọ na Europe nwere oke mgbaru ọsọ dị egwu na ọkwa ọ bụla.
N'agbanyeghị otuto ahụ, ọ bụ naanị ndị na-akwado football ole na ole ejirila oge ha gụọ Timo Werner's Bio. Anyị akwadola nke ahụ maka naanị gị, na-enweghịkwa agụụ ọzọ, ka anyị malite n'akụkọ banyere afọ ndị mbụ ya.
Timo Werner Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na-ebido Biography, 'Turbo Timo' bụ aha aha German. A mụrụ Timo Werner na 6th nke March 1996 na nne ya, Sabine Werner na nna, Günther Schuh n'obodo Stuttgart, ndịda ọdịda anyanwụ Germany.
A mụrụ Footballer n'enweghị nwanne nwoke na nwanne nwanyị, nke pụtara na ọ bụ naanị nwa nwoke mụrụ nye nne na nna ya.
Ikekwe ị ga-echeworị… Gini mere na ọ naghị aza aha nna ya- 'Schuh'.
Eziokwu bụ, nne na nna Timo Werner n'agbanyeghị na ha anọkọ ogologo oge, ọ dị ka alụbeghị di na nwunye. N'ihi nke a, onye ọkpụkpọ nwere aha nne ya 'Werner'.
Ezigbo Ezinụlọ Timo Werner:
Nna German, Gunter Schuh, na-arụ ọrụ n'ezinụlọ etiti na Stuttgart.
Ọ bụ ụlọ, ruo taa, nwere ụkpụrụ dị elu maka ịkụziri ndị na-eto eto. Timo Werner sitere na mmalite dị umeala n'obi n'ụlọ ya pụrụ iche.
Mgbe nne na nna ya tolitere, ha kụziiri ya ụkpụrụ omume anọ dị mma. Ha gụnyere; (1) ịkwanyere mmadụ niile ùgwù (2) ịna-emesapụ aka ma ọ bụ inye aka (3) inwe mmetụta nke ibu ọrụ (4) anaghị emejọ onye ọ bụla na (5) ịmepụta àgwà nke ikerịta ihe.
N'ịtụle nzụlite dị umeala n'obi ya nke gosipụtara omume ya taa, Timo Werner gwara ndị mgbasa ozi German otu oge;
Mgbe mụ na ndị ezinụlọ m na ndị enyi m nọ, abụghị m Timo Werner ndị ama ama. Abụ m Timo, nwa nwoke dị umeala n'obi na ezigbo enyi ya.
Eziokwu bụ, abụ m nwa okorobịa dị ka ndị ọzọ. M mee ihe ọjọọ, ndị mụrụ m na ndị enyi m anaghị atụ ụjọ ịgwa m!
Anyị niile maara na ọ bụ onye German Striker nke ukwuu, agbanyeghị, ọ bụghị onye ọ bụla maara ebe Germany o si bịa.
Ezinụlọ Timo Werner sitere na Stuttgart, isi obodo ọdịda anyanwụ Germany nke Baden-Württemberg.
Ọ bụrụ na ị maghị, aha obodo ahụ bụ “kredul nke ụgbọala”. You maara?… Stuttgart nwere isi ụlọ ọrụ Porsche na onye pụrụ ime ihe niile Mercedes-Benz.
Timo Werner Mmụta na Nrụpụta Ọrụ:
Nke mbu, ndi nne na nna Timo Werner - karia papa ya ka ahuru dika onye mbu injinia nke akara aka ya. Nna nna ya bụ onye na-agba ọsọ na-amakarị onye mechara bụrụ onye nchịkwa.
Dịka nwatakịrị, nna Timo Werner, Günther Schuh kụziiri ya ihe ntachi obi pụtara.
Na mbido ụbọchị ya, o kwere ka nwa ọ mụrụ naanị ya na-agbago ugwu n'aha iji meziwanye ike ya na egwuregwu ya.
Dị ka nwatakịrị dị umeala n'obi nke zụlitere nke ọma, Timo nwere echiche nke ịmasị Nna ya, onye ọtụtụ (karịsịa nwa akwụkwọ ya) na-ahụ dị ka ịdọ aka ná ntị nke nwere 'ikike' ịnye ọzụzụ.
N'ụbọchị, mgbe ọ na-agba ọsọ ụbọchị niile, Timo ga-ajụ papa ya mgbe ọ bụla ọ gbasịrị ọsọ ọsọ ya.
N'ịga n'ihu na-agbago ugwu hụrụ Onye Ntorobịa ka ọ na-etolite ike ọsọ ya - ihe omume nke ghọworo otu n'ime akụ kachasị ukwuu taa.
Mario Gomez- Heromụaka dike:
Günther Schuh duziri nwa ya ka ọ bụrụ onye na-awakpo ya, ihe ngosi nke nyere ya ohere ịhọrọ ihe nlereanya - na onye Mario Gomez, onye mbu German n'ihu.
N'oge ahụ (tupu ọ dị afọ iri na ụma), Timo ga-arapara na akwụkwọ akụkọ German nke ihe niile n'ime ụlọ ya.
N'ụzọ na-emegide onwe ya, ọ maghị na ọ ga-abụ onye lara ezumike nká ya (Mario Gomez) si na otu ndị otu egwuregwu ndị German.
Timo Werner Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Na-etolite, enwere obi ike dị elu na football ga-abụ ọkpụkpọ ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, nna ya Günther Schuh kwere ka nwa ya nwoke debanye aha na TSV Steinhaldenfeld, ụlọ ọgbakọ ebe ọ na-azụ ndị otu ha dị elu.
N'ịchọ ịmasị nwoke ọ lere anya karịa nna ya. Little Timo Werner, nke dị n'okpuru ebe a malitere site na mpaghara.
Motkpụrụ Nkwali nke Nna:
N'ịchọkwa ịhụ ka ọ na-eme nke ọma, nna Timo kwesịrị itinye mkpali ego dịka ụzọ a chọrọ iji hụ ka nwa ya nwoke na-enwe ọganihu.
Eziokwu bụ, nwatakịrị ahụ enwechaghị mkpali site n'aka nne na nna (karịa na nna ya) - ihe omume nke mere ka ọ nwetụrụ obere ike dị ka nwatakịrị.
Ị maara?… Gunter Schuh nyere nwa ya nwoke ego ego ọzọ maka goolu ọ bụla o meriri.
N'ịkọwa otu ihe ahụ si mee, Michael Bulling, bụ onye isi bọọlụ na TSV Steinhaldenfeld kwuru otu mgbe na ya na-akọ akụkọ. N'okwu ya;
“Papa Timo Werner bụ onye nchịkwa nke otu ndị okenye anyị. Ọ na-abịa ikiri nwa ya nwoke dị afọ asaa ka ọ na-egwu egwu.
Otu ụbọchị, o kwere obere Timo nkwa ntakịrị ego maka ebumnuche ọ bụla. Echere m na o mechara kwaa mmakwaara. ”
Maka Gunter Schuh, usoro mkpali dị otú ahụ mechara bụrụ mmega ahụ dị oke ọnụ. Nke a bụ n'ihi na nwa ya nwoke dị afọ asatọ (Timo Werner) tụrụ ụjọ.
Laa azụ n'oge a, agbapụ nke onye na-eto eto siri ike nke ukwuu na ọ dịghị onye nwere ike ịghọta otú o si agba agba ma na-agba ọsọ ọsọ.
Timo Werner Akụkọ nke na-enweghị isi akụkọ - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Mgbe ọ na-eme nke ọma maka ọgbakọ otu obodo dị na Stuttgart, Günther Schuh hụrụ ka ndị mgbasa ozi German na-enwe mmasị na nwa ya nwoke.
Iji mee ka ọ kwadebe n'ihu maka ọdịnihu, Günther Schuh were Timo- AGAIN- gbagoro n'ugwu ahụ - oge a, na-eme ka ọ gbaa ọsọ ruo ọtụtụ awa yana ịgbatịkwu egwuregwu bọọlụ.
Ọ maara nke ọma na ndị nnukwu mpaghara VfB Stuttgart nwere mmasị na nwa ya nwoke.
Mgbe ọtụtụ ndụmọdụ gachara, ndị nne na nna Timo Werner kwetara ka nwa ha German Rising German sonyere ezinụlọ VfB Stuttgart nke obodo ezinụlọ.
N'ebe ahụ, Little Timo bilitere n'etiti ndị ntorobịa. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwekwara Serge Gnabry na Joshua Kimmich, Timo bụ onye egwuregwu pụrụ iche ha.
Ndị mgbasa ozi German, dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a, amalitela ịchụ nwa ahụ n'oge ọ dị obere.
Ka ọ na-aga n'ụzọ ya, nna Timo Werner gara n'ihu n'usoro nke iji mkpali kpalie nwa ya nwoke, ọbụlagodi n'oge ọ na-egwuri egwu maka VfB Stuttgart.
N'oge a, a gbanwere iwu na nna ya kwetara ịkwụ ụgwọ naanị maka ihe mgbaru ọsọ Timo ga-eji isi ya na ụkwụ aka ekpe ya.
N'ịchọ ime nke a, "Turbo Timo" dịka a na-akpọ ya aha ga-eme mgbe ụfọdụ ihe mgbagwoju anya naanị iji nwee ike iji isi na ụkwụ aka ekpe mee akara.
Ka oge na-aga, nke ahụ bịara dịrị nwata ahụ mfe, ọ hụkwara na ya na-ewere ego nna ya niile.
Timo Werner Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Dị ka a tụrụ anya ya, ọ dịghị oge tupu nwata Timo hụrụ onwe ya na-ekpuchi nna ya nke ọma, onye bụ onye ama ama ama ama ama egwuregwu bọọlụ.
N'ihe mgbaru ọsọ maka ihe ọchị na ọkwa ntorobịa, onye ntorobịa dọtara mmasị site n'aka RB Leipzig onye nwetara ya na 11th nke June 2016.
Otu afọ mgbe e mesịrị, a kpọrọ ya ka ọ banye n'òtù mba Germany Joachim Löw- okwu ikpo okwu o jiri zoo ma wepu oge o bu nwata- Mario Gomez.
Eziokwu bụ, Ọrụ German RB Leipzig bụ nke e gosipụtara site na ịkọwa ihe nketa nke oge ntorobịa ya. Timo Werner banyere oge mbụ ya na klọb ahụ, na-atụle 21 ugboro ugboro na egwuregwu 31.
na Julian Nagelsmann, Ihe mgbaru ọsọ ya ruru 78- nke na-adọta Frank Lampard nke na-enwu gbaa na London- Chelsea FC.
Dị ka n'oge a na-emelite akụkọ ndụ a, RB Leipzig mmanụ ụgbọala '(dị ka aha ya na-akpọ ya) na onye òtù ọlụlụ ya na mpụ- Kia Havertz kwuru na-ahazi ka aha ha na-ewu ewu na England.
Obi abụọ adịghị ya, ndị na-akwado bọọlụ bọọlụ Chelsea kwenyesiri ike na ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na England n'okpuru Frank Lampard. Ihe ndi ozo nke Bio, dika anyi kwuru, bu akuko ugbua.
Akụkọ Timo Werner nke --hụnanya - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Nwa?
Dị ka okwu ahụ si kwuo hind N'azụ ndị egwuregwu bọọlụ ọ bụla na-aga nke ọma, WAG na-adịkarị mma.
N'ihi ya, tnke a anaghị agọnahụ eziokwu ahụ na ihu nwa Werner mara mma agaghị adọta ụmụ nwanyị nwanyị ga-achọ ịkpọ onwe ha ndị enyi nwanyị, ihe nwunye ma ọ bụ nne nke nwa ya ma ọ bụ ụmụ ya.
Banyere Julia Nagler - enyi nwanyị Timo Werner:
Ruo ogologo oge, onye na-eti ihe na-akpakọrịta Stuttgart nke dabara adaba Julia Nagler, kemgbe ọ bụ nwata.
Timo Werner dị otu afọ karịa enyi nwanyị ya - Julia Nagler. N'okpuru ebe a, ọ bụ nwa akwụkwọ na Mahadum Stuggart.
Julia Nagler, dị ka ọtụtụ maara, bụ onye na-adịghị achọ ọdịmma onwe ya nanị nke na-eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado enyi ya nwoke n'agbanyeghị na ọ pụtara itinye ndụ ya na njide.
Oge ezumike bọọlụ na-adịkarị iche maka di na nwunye ahụ ka a na-ahụkarị ha n’oge ezumike kachasị amasị ha. Eziokwu bụ, Di na nwunye a na-ekwusi ike na-agbasi ike n'azụ mgbasa ozi.
Timo ọ ga-alụ enyi ya nwanyị - Julia Nagler?
N'agbanyeghị ịnọkọ ọnụ ruo ogologo oge, atụmanya dị n'akụkụ ndị Fans abụghị ihe ọzọ karịa ịhụ ma ndị hụrụ n'anya na-alụ di na nwunye. Agbanyeghị, nkwenye ugbu a na ezinụlọ Timo Werner nwere ike ọ gaghị eme nke ahụ.
Anyị kwuru na mbụ na Bio nke a gbasara nna onye egwuregwu bọọlụ na mama ha ekwenyeghị ka ha kee eriri- ma na-ebi ndụ obi ụtọ. Nke a nwere ike ịbụ ikpe n'etiti Timo Werner na enyi ya nwanyị, Julia Nagler.
Timo Werner Ndụ Nke Onwe:
Ikekwe ị marala ya dị ka onye na-egbu mmadụ, ma olee otu ị maara ya nke ọma na ọ na-egwu egwuregwu?
Eziokwu bụ, Turbo Timo bụ onye na-echebara ọtụtụ ihe gbasara ọdịdị ihu ya n'anya- ọ nweghị ihe ọ bụla karịa ịkpụcha ntutu.
Ọ na-arara nnukwu oge ọ nwere n'iwepụta ọrụ dị ala, ezigbo agwa onwe ya ọ mụtara n'aka nne ya.
Timo Werner si LifeStyle:
N'ebe a, anyị ga-agwa gị otu onye n'ihu ga-esi jiri ego ya. Na agbanyeghị ubi egwu, Timo ga - eji ego ya na United States na - ele NBA anya.
Dị ka a hụrụ n'okpuru, ọ na-eguzosi ike n'ihe nke ndị Lakers.
Imogbọ ala Timo Werner:
Maka nwoke Chelsea, ịhụnanya maka German Autos na-adịgide adịgide. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na obodo German nke Stuttgart- ebe ezinụlọ Timo Werner si bịa bụ ụlọ nke ụgbọala-Mercedes Benz na Porche.
Nwoke mbụ RB Leipzig na-ahọrọ iyi akwa uwe elu dabara na ụgbọ ala ya. Dị ka a na-ele anya n'okpuru, nhọrọ ụgbọ ala ya bụ Mercedes Benz. Ọ bụkwa onye na-agba ọsọ ụgbọ ala ịgba ọsọ.
Timo Werner's Net Worth:
Iji nyochaa akụ na ụba ya, anyị na-eleba anya n'ihe ọ na-akpata na Chelsea. Timo Werner na-akwụ ụgwọ kwa afọ na Chelsea bụ ihe dịka, 9,009,840.
Ego site na ụgwọ ọrụ, mgbasa ozi na nkwado na nkwado ga-adị ọtụtụ ọbụlagodi mgbe ewepụrụ ụgwọ ya site na akụ ya. Maka nke ahụ, anyị nwere ike ịkọ atụmatụ ọnụọgụ Timo Werner ruru $ 29 nde.
Ndụ Tern Werner:
Dị ka a na-ekwukarị, ike ezinụlọ, dịka ike nke ndị agha, bụ iguzosi ike n'ihe nye ibe ha.
Nke a bụ ebe e wuru ezinụlọ Timo Werner. Akụkụ nke Bio anyị ga-agwa gị ọtụtụ ihe gbasara nne na nna ya na ndị ọzọ so na ya.
Banyere nne Timo Werner:
Ihe mbu kwesiri ihu banyere Sabrine Werner, nne nke German bu eziokwu na aha nna ya na nwa ya nwoke Timo zuru oke. Mama Werner na-enwetakarị otuto maka ọrụ ya n'ịhụ na nwa ya nwoke gụsịrị akwụkwọ.
Dabere na Bundesliga, Timo gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị ekele maka Sabine Werner, nne ya chọrọ ka nwa ya nwee obere ụlọ akwụkwọ sekọndrị tupu ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ.
N'ihi nlekọta ya, Timo n'oge ahụ n'ụlọ akwụkwọ bụ nwata nkịtị ma ọ bụghị nwa akwụkwọ na-agwụ ike. Thou tụfuru ọkara nke oge ụlọ akwụkwọ ya n'ihi nkwenye bọọlụ.
Ọrụ nke nne ya kwụrụ ụgwọ ka o nwee ike gụsịrị akwụkwọ na 2014 mgbe ọ dị afọ 17 (dịka onye ọkpụkpọ Bundesliga).
Banyere Nna Timo Werner:
Dị ka e kwuru na mbụ, Günther akpụkpọ ụkwụ, onye na-agba ọsọ na-amakarị onye mechara ghọọ onye nchịkwa bụ naanị nna na Geman.
N'ịchọta ibi ndụ nrọ ya nke ịbụ onye pro, nna dara ogbenye banyere ịnye ọzụzụ n'echiche nke ime ka nwa ya nwoke gaa n'ihu ebe ọ hapụrụ. Obi dị m ụtọ, Timo Werner na-ebi ugbu a nrọ nna ya.
Banyere ụmụnne Timo Werner:
Mgbe emechara nnyocha siri ike, anyị ghọtara na onye ọkpụkpọ bọọlụ bụ naanị otu nwa amụrụ nye ndị mụrụ ya - na enweghị nwanne nwoke ma ọ bụ ụmụnne nwanyị.
Timo Werner Eziokwu efu:
Eziokwu nke 1: Nkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ na nha anya na nkezi Britain:
Nke a bụ nyocha nke ihe Timo Werner na-enweta maka naanị ịgbacha bọọlụ gburugburu ubi.
Kwa Afọ £ 9,009,840 € 10,043,989 $ 11,865,779
kwa ọnwa £ 750,820 € 836,999 $ 988,815
Kwa Izu £ 173,000 € 192,857 $ 227,836
Kwa .bọchị £ 24,714 € 27,551 $ 32,548
Kwa elekere £ 1,030 € 1,148 $ 1,356
Kwa Nkeji £ 17 € 19 $ 22.6
Kwa nke abụọ £ 0.28 € 0.32 $ 0.37
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Timo Werner'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ọnụ ego ndị Britain na-erite £ 29,009 kwa afọ ga-arụ ọrụ maka afọ 25 na ọnwa 7 iji nweta Timo Werner na-akwụ ụgwọ kwa afọ na Chelsea.
Eziokwu nke 2: Eziokwu Eziokwu:
Timo Werner na-ekpuchi 11.11 sekọnd mgbe ọ gbasịrị 100 mita na bọl. Nke a mere n'afọ ikpeazụ ya n'ụlọ akwụkwọ. N'ihi nke a, ndị mgbasa ozi German kpọrọ ya 'Turbo Timo' niile maka ekele ahụ.
Eziokwu nke 3: Nhọrọ ndị FIFA Gamers maka Ọnọdụ Ọrụ:
Ndị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na ọgụgụ isi bụ isi ihe ọrịre ya na pitch yana FIFA.
Eziokwu nke 4: Ọ kpọrọ mkpọtụ asị:
Na 2017 gbara gburugburu, nwatakịrị ahụ nwere nsogbu iku ume na ikuku nke ikuku nke ndị na-emegide ya na-akpata.
Ọnọdụ ọjọọ dị na Turkey hapụrụ Timo n'ekweghị uche. Na nzaghachi, onye na-eti ihe mere mkpamkpa site na ịpị mkpịsị aka ya na ntị abụọ na ndị ọzọ iji gbochie ụda.
Nke ahụ arụghị ọrụ ma emesịa nye ya earplugs. Mgbe minit 31, Timo hụrụ onwe ya na egwuregwu ahụ.
Eziokwu nke 4: Otu oge Manchester United Fan:
Dị ka n'oge ederede Bio ya, Timo Werner na-egwu Chelsea FC. Eziokwu bụ, ọ na-enwe obi ụtọ na United, otu ụlọ ọ ga-ahọrọ igwu egwu n'ihi akụkọ ihe mere eme ha.
Eziokwu nke 5: Okpukpe Timo Werner:
Ikpe ikpe site na aha mbụ ya, ị nwere ike ịkọwa na ọ bụ Onye Kraịst site na ịmụ nwa. Timo bụ aha nwata nwoke pụtara “nsọpụrụ Chineke”.
N'obodo ebe ezinụlọ Timo Werner si, ihe karịrị 50% nke ụmụ amaala bụ ndị Kraịst nke kachasị bụrụ ndị Katọlik. N'ihi ya, enwere mgbanwe dị ukwuu n'okpukpe ndị na-agba bọọlụ bụ Kraịst.
Aha n'uju: Timo Werner.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị iteghete nke Machị 6.
Obodo Obodo. Stuttgart, Germany.
Ndị nne na nna: Nna (Günther Schuh), Nne (Sabine Werner).
Ndị nne na nna ọnọdụ: Na-alụghị di (dị ka na 2020)
Ụmụnne: Onweghi Nwanne na Nwanne.
Ogo n'ogo: 5 ụkwụ 11 sentimita asatọ ogologo.
Education: TSV Steinhaldenfeld na Stuttgart High School.
Rygwọ ọnwa na Chelsea: 9,009,840 kwa afọ.
Ezigbo Net: $ 29.
Timo Werner's Biography na-akụziri anyị ka anyị kwenye na inwe nguzosi ike na mkpebi siri ike bụ ihe ndabere maka ịga nke ọma. Ọzọkwa, ịbụ nne ma ọ bụ nna na-enye nkwado - dịka ụzọ nke ya bụ iburu ọdịmma kasịnụ nke nwa gị n'obi.
Ndị nne na nna Timo Werner - Günther Schuh na Sabrine Werner enyerela aka n'ịhụ ka nwa ha nwoke mere ka nrọ ya dị ka a hụrụ na Bio ya. Jiri obiọma mee ka anyị mara ihe ị chere banyere isiokwu anyị ma ọ bụ ndị na-agbacha bọọlụ na ngalaba nkọwa.
Achọpụtara m na nke a bụ eziokwu